Ny Fashion dia sikin-dàlana, ary ny lamaody ankehitriny, dia noforonina taona maro lasa izay. Izany dia mihatra amin'ny ambany skirt. Raha noheverina ho mahamenatra ny fampisehoana an'io antsipirihany teo aloha io, dia ny akanjo ambany ambany eo ambany fitafy no natao manokana mba hahitan'ny olona azy io. Fa momba ny zavatra rehetra araka ny filaharany.
Ny tantaran'ilay zavatra dia akorandriaka ambany
Amin'ny voalohany, ny pancake dia heverina ho karazana kilemaina ary mitafy amin'ny akanjo fotsiny. Tamin'ny taonjato faha-18, nomena tombony manokana ireo jirony ambany, satria fantatra amin'ny erotisma sy ny fiaraha-mikorana izy ireo.
Amin'ny fotoana samihafa dia lamaody ny akanjony iray hatramin'ny podsubnikov maromaro, ary samy nanana ny anarany ny tsirairay. Avy amin'ny isan'ny ambany ambany dia miankina ny habetsaky ny akanjo sy ny famirapiratry ny akanjo, indraindray ny vehivavy dia tsy maintsy mitafy rongony dimy. Taoriana kely dia nanomboka nampifangaro ny akanjo, ary indraindray dia nisolo tanteraka ny rafitra misy ny rafiny antsoina hoe "crinoline". Tamin'ny fotoana nanaovany, ny akanjo lava ambany dia vita tamin'ny sehatra ary norakofana tamin'ny dantelina, toy ny hita rehefa nipoitra ny crinoline.
Ankizivavy ambany ambany
Ankehitriny, niova tanteraka ny fomba fijery amin'ny skirt ary tsy misy afa-tsy hita amin'ny akanjo hariva sy ao anaty tahirin-tsarimihetsika malaza. Amin'izao fotoana izao, afaka manavaka ireto karazana podsubnikov manaraka ireto isika:
Takelaka ambany tulle . Manana haavonam-pahamarinana mahazatra ary manampy ampiana miaraka aminy. Ny zipo ambany ambany amin'ny harato dia ampiasaina amin'ny akanjo fampakaram-bady sy hariva, ary koa ho an'ny akanjo baolina. Tena malaza ireo podsyubniki ireo nandritra ny 60 taona rehefa tian'ireo vehivavy manao akanjo lava kely ambany ambany lohalika miaraka amin'ny lantihy eo amin'ny tady.
Satelika ambany ambany. Matetika izy io no vita amin'ny chiffon, seza na dantelina. Androany, fitafiana lamaody avy eo ambaniny no mitopy mihintsy vitsy amin'ireo povyubnik. Izany dia sady maneho fihetsika mamoafady. Marc Jacobs , Louis Vuitton, Marni, ary Etro dia naneho ny heviny momba ny lohahevitry ny akanjo misy akanjo ambany.
Ny akanjo dia toy ny kilao. Amin'izao andro izao dia misy satroka satroka na satin-kiraro ny akanjo sy akanjony ho an'ny fampiononana lehibe kokoa rehefa tratrany. Tsy manome fahalemena sy hatsaran-tarehy fotsiny izy ireo, fa tsy mamela azy ireo ho lasa fitaovam-piadiana ary hifikitra amin'ny tongotra.
Akanjo avy amin'ny guipure ho feno
T-shirt misy stratezina
Dresses amin'ny ruffles
Platform shoes ary kiraro maina
Ny akanjo hoditra vehivavy
Sakamalao rosinina eny amin'ny arabe
Fritters amin'ny sakafo maraina
Takelaka hazo ho an'ny rindrina
Oviana ny fipoakan'ny ovaria - vokany
Fanomezana fanomezana ho an'ny lehilahy
Inona no atao hoe metformin ho an'ny fatiantoka?
Recipe amin'ny voatabia voatoto ho an'ny ririnina
Akanjo ho an'ny vehivavy matavy
Matetika ny ankizy no mibanjina ny masony
Hazo fanangonam-bokatra ho an'ny cactus